Nhau - NEWYEA Boka rakakokwa kuenda ku2021 Internet yezvinhu Wind Direction Carbon Zero Summit yekukurukura mikana mitsva yekusimudzira girini yemabhizinesi.
NEWYEA Boka rakakokwa kuenda ku2021 Internet yezvinhu Wind Direction Carbon Zero Summit kuti vakurukure mikana mitsva yekusimudzira girini yemabhizinesi.
Musi waChikunguru 8,2021, iyo "2021 Internet yezvinhu Wind Direction Carbon Zero Summit", inotungamirwa neXiamen Development uye Reform Commission uye Xiamen Bureau yeindasitiri neRuzivo Technology, uye zvakabatana zvakatsigirwa neTatu Marine Research Institute ye Natural Natural uye Kuronga. Komiti yeChina International Internet yezvinhu Expo, yakaitirwa muXiamen. Dr. Lin Guijiang, sachigaro weXiamen NEWYEA Boka, akakokwa kuti ape hurukuro yekutaura uye vakaungana pamwe nenyanzvi mumunda weAloT, dhata hombe uye kudyara kwemaindasitiri kuti vaite nhaurirano inoenderana ne "kukurudzira shanduko yezvehupfumi nekuvhura zero-kabhoni hupfumi" ndokutaura nezve mikana mitsva yemabhizinesi eAloT pasi pechinangwa che "double kabhoni" chinangwa kuChina.
Pamusangano uyu, Dr. Lin Guijiang, nemusoro wenyaya we "Carbon Zero Smart Energy Technology Innovation", vakaunza basa rekudzora hutachiona nemikana mikuru yemusika pamafekitori neindasitiri yemotokari pasi pechinangwa chekabhoni. Akataura kuti ikozvino pasi pechiitiko chekabhoni yepamusoro, kutengesa kwemagetsi emagetsi matsva kuri kusimuka, kunotarisirwa kukwira muna 2040, kupinda kwemotokari dzemagetsi kuchasvika zana muzana muna 2045, pakazosvika 2060 kunounza mari nyowani muna 2060; uye zvinoenderana nedata remusika, huwandu hwakazara hwemamirioni mazana mashanu ekuchaja uchapfuura muna 2060. Kupinda nekukurumidza kwemotokari dzemagetsi kwave kuita kiyi yekufambisa kudzikisira kabhoni; inosanganiswa nekuvandudzwa uye kuvakwa kwemusika wekutengesa kabhoni, ichaenderera mberi nekufambisa kusangana kweye nyowani simba indasitiri yemotokari uye green green technology, inogadzira zvisingaenzaniswi kukosha kwemusika.
NEWYEA Boka rinogadzira uye rinovaka nyowani nyowani sisitimu ine simba nyowani semuviri mukuru, uye inovaka yakachena, yakaderera-kabhoni, yakachengeteka, uye inoshanda gadziriro yesimba. Ichabatanidza hunyanzvi hwetekinoroji uye nzira yekubatanidza yehuwandu hwekugadzira, simba rekuchengetera, kuchaja uye magetsi edhijitari uye masimba emagetsi, uye inotungamira shanduko ine hupfumi uye yemagariro kuburikidza nekusimudza girini uye yakaderera kabhoni yesimba nesimba.
Panguva imwecheteyo, pazuva remusangano, vakuru vakuru vanobva kumakambani anodarika makumi maviri nemayunivhesiti akatenderera nyika vakashanyira dzimbahwe reNewYEA Group kushanya nekutsinhana. Dr. Lin Guijiang akaunzawo kuvandudza kweNewyeA Boka pamusoro pemakore zvakadzama, uye akaunza zvigadzirwa zvine hukama zvehungwaru hwekuchaja ecology yakagadzirwa nekambani. Vanoremekedzwa vanhu vari pamusoro pemabhizimusi ese uye mayunivhesiti vakanyatso kuona mamiriro eindasitiri nekusimudzira kweNewYEA Boka.
Uye zvakare, pamberi pe "Internet yezvinhu Wind Direction Carbon Zero Summit", musi wa2 mwedzi uno, Zhangzhou Intelligent Manufacturing Industry Promotion Association yakaitawo musangano wekupemberera zuva rekucherechedza uye musangano wechipiri wekanzuru wechipiri. Pazuva rimwe chetero, Dr. Lin Guijiang, semutungamiri weZhangzhou Intelligent Manufacturing Industry Promotion Association, akaita mushumo nezve mamiriro ekuvandudza esangano rekusimudzira gore rino.